Thunder & Lightning - Inona no atao rehefa any ivelany?
Hobbies & Activities Basics
Na dia misy loza aza ny karazana tafiotra rehetra dia ny oram-baratra no mety ho toetr'andro mety ho tratran'ny trondro, indrindra amin'ny fahavaratra sy ny tolakandro na hariva. Ny tselatra no antony voalohany mahatonga ny toetrandro mifandray amin'ny toetrandro sy ny antony lehibe mahatonga ny ratra amin'ny toetrandro. Misy olona iray amin'ny fitifirana tselatra efatra eo amin'ny olombelona no mitranga amin'ny olona tafiditra amin'ny fialam-boly; Maro no eo na eo akaikin'ny rano.
Mba hisorohana ny fanaovana statistika, ny mpangalatra dia tokony hijery ny lanitra ho famantarana ny oram-baratra miandry, mialà eo am-pototry ny rano ary indrindra raha mandre kotroka izy ireo ary maka ny toerana tokony hialana amin'ny tany. Ireto misy torohevitra manokana sy info.
Jereo ny toetrandro
Isaky ny misy vintana kely amin'ny oram-baratra, ny fepetra voalohan'ny fiarovana dia ny manamarina ny toetr'andro sy ny mijery ny lanitra. Eritrereto ny famantarana ny tafio-drivotra iray: kotrokorana matevina, manjelanjelatra lanitra, tselatra, ary fitomboan'ny rivotra. Mankanesa any amin'ny onjam-peo NOAA, ny toetr'andro amin'ny radio VHF, na radio AM-FM raha afaka, noho ny vaovao farany momba ny toetr'andro. Raha manana finday an-tariby ianao ary manaova fampihatra amin'ny toetr'andro, dia mety ho mailaka ianao amin'ny maha-hafatra an-tsoratra azy. Azo antoka, azo antoka ny fampiasana finday na telefaona an-tariby mandritra ny oram-baratra, fa tsy antso an-tariby.
Aza mitaredretra; Mialà sasatra
Raha misy oram-baratra mampatahotra, miditra ao an-trano, tranobe lehibe, na fiara mifamatotra (tsy fiovaovana na bedin'ny kamiao) no fomba tsara indrindra.
Tsy azo atao izany ho an'ny mpangalatra raha tsy efa mandeha tsara ny oram-baratra. Maro ny olona mametraka ny tenany ho amin'ny loza tsy amin'antony, amin'ny fiandrasana ela loatra handraisana fepetra rehefa manakaiky ny oram-baratra.
Ny mpangalatra izay manondraka na izay eny amoron-dranomasina na any amoron-tsiraka dia mila miala avy ao anaty rano.
Ny mpihazakazaka amin'ny sambo dia tokony ho tonga any amin'ny toerana azo antoka amin'ny tany raha azo atao. Raha tsy mety, mety ho afaka hiala amin'ny lalan'ny rivo-doza izy ireo amin'ny alàlan'ny fifindrana, fa raha tsy mandeha tsara izy ireo vao tonga. Tsy afaka miala ny oram-baratra izay akaiky. Mba hanaovana izany dia mila mahafantatra izay torolalana entin'ny oram-baratra ianao, ka tsy misy afa-misosa tsara amin'ny vatan'ny rano, ary raha toa ka tsy mahafeno ny haavony ny tafio-drivotra.
Mijanòna kely, Aza milefitra
Raha tratra eny an-tanety ianao, dia aza mijoro eo ambanin'ny hazo iray tsy fantatra, telefaona an-telefaona, na zavatra mitoka-monina, na eo akaikin'ny lamosina na fefy vy. Aza avela handroso eo amin'ny tontolo manodidina. Mitadiava fialofana any amin'ny faritra ambany ary mihamitombo ny hazo kely. Any amin'ny faritra misokatra, mandehana any amin'ny toerana ambany, toy ny lembalemba na lohasaha. Raha toa ianao ka ao anaty vondrona misokatra, miparitaka, mitazona ny olona 5 ka hatramin'ny 10 yards apart. Mialà amin'ny metaly ary aza mitondra na manangona zavatra, indrindra amin'ny zavatra vita amin'ny metaly na hazo. Esory daholo ny metaly avy amin'ny volonao na ny loha, ary esory ny boot-nify.
Aza milavo lefona
Ny tselatra dia mety hahatratra hatramin'ny 10 kilaometatra avy eo afovoan'ny tafio-drivotra, ka tokony hotandremana ny fepetra na dia tsy mivantana mivantana aza ny rahona.
Raha voafandrik'ilay toeram-pialofana misokatra ianao ary raha mahatsiaro ny volo ianao, dia mety hitarika anao ny tselatra. Mandeha mandohalika ianao ary miondrika, mametraka ny tananao eo amin'ny lohalinao. Aza mandry amin'ny tany. Araka ny Center Center for Control Control (CDC), ny "fihenana dia mety hampihena ny loza ateraky ny tondra-drano amin'ny tany satria voafetra ny fotoana ny tongotra roa eo amin'ny tany amin'ny fotoana iray."
Raha tafiditra ao anaty sambo ianao (tokony efa ndao ny PFD ianao), ary mitranga izany, na manomboka mihetsiketsika ny rantsan-tànanao na ny tsipika mitsambikina avy ao anaty rano, dia hitifitra ny tselatra. Alao ny tehinao avy eo, miondrika, miantsoa, ​​ary apetraho eo an-dohanao ny tananao, ary ataovy izay hahazoana antoka fa tsy hikasika zavatra hafa ao anaty sambo.
Ny antony ao ambadik'ireny toerana ireny, raha tokony handainga fotsiny, dia rehefa mitady hitifitra ny tselatra, dia mikatsaka ny haingana indrindra amin'ny tanjona ito izy.
Ny zavatra bebe kokoa izay ifikiranao na mifandray amin'ny, dia ny tselatra kokoa dia hamakivaky ny vatana amin'ny ezaka hitadiavana lalana.
Andraso 30 minitra aorian'ilay rivo-doza
Fitokonana maivana maro no mitranga raha tsy misy ny fampitandremana momba ny kotroka, noho izany dia ilaina ny fepetra na dia tsy misy kotroka aza. Rehefa misy kotroka sy tselatra, azonao atao ny milaza amin'ny habetsahan'ny kilaometatra ny tselatra avy amin'ny toerana misy anao amin'ny alalan'ny fanisana ny segondra eo anelanelan'ny feon'ny kotrokorana sy ny fahitana ny tselatra, avy eo mizara izany amin'ny dimy. Na izany aza, milaza ny mpahay siansa fa raha maheno kotroka ianao, dia mety ho voan'ny areti-mandringana ianao ary mety ho tratran'ny tselatra na dia ao anatin'ny 10 kilaometatra aza ny ivon'ny tafio-drivotra.
Ny CDC dia milaza fa ny fiandohana sy ny fiafaràn'ny tafiotra no fotoana mampidi-doza indrindra ary mety mbola misy koa ny loza mitatao na dia mahita lanitra manga aza ianao. Milaza ny National Weather Service fa maherin'ny 50 isan-jaton'ny fatin'ny tselatra no miseho rehefa tapitra ny oram-baratra .
Ho fampahalalana tsara momba ny antony, sy ny fiomanana, ny oram-baratra, ny tselatra, ary ny tornados, vakio ny pdf amin'ity tranonkala NOAA ity.
Fiarovana avo lenta (MOD) sy ny fiankinan-doha
Nahoana no isaky ny 4 ora ny marika miaraka amin'ny marika c-form?
Inona no ijoroan'ny SCUBA?
Ny Musique Term Allegro sy ny endriny malalany
Inona no atao mifanohitra amin'ny zavakanto?
Ny baiko Italiana an'ny mozika piano
Ahoana ny fomba fampiasana sambondanitra sambo
Tone - inona no dikany?
Symbols of Piano Music II
Inona no famaritana ny tebiteby amin'ny fisakafoanana?
Haingana, fomba mahazendana handrafetana kiraro
Araka ny harenany - Filipiana 4:19
2015 vaovao sy tradisionista 2015 Ford Mustang Color Options
Lalao hanohana ireo mpianatra manana fahasembanana
Camp Summer Music
Ny fetin'ny fo masin'i Jesoa
3 sampana governemanta ao amin'ny Repoblika Romana
Shirley Chisholm: Vehivavy mainty hoditra voalohany hihazakazan'ny filoha
Mitandrema amin'ny tennis-tennis na Ping-Pong
Strong Acids and Acid Strongest World
Ny tifitry ny dobo lehibe fototra: Mianara teknolojia biletà
Mampiasa ny 'Malo', 'Mal' ary teny mifandraika amin'ny teny Espaniôla
Fampiofanana Amerikana mampiavaka an'i Ann Cook
Ny lahy sy ny vavy amin'ny teny frantsay: ny endriky ny lahy sy ny vavy
Fitiavana tsy manam-paharoa: Roméo Shamjo Manga
Inona no niantsoana an'i Ejipta fahiny?
Fampitahana: tsara, tsara, tsara indrindra
20 Sary mampidi-doza Terrible Real Estate